Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti nsu ngere na ngere nchara zinc
Mgbidi ígwè bụ ihe ịchọ mma nke na -agbanwebeghị kemgbe ọtụtụ afọ n'ime ụlọ ahụ, ọ bụkwa ụdị ịma mma dị ala igosi ndị mmadụ. Usoro usoro nke ihe nchedo igwe nkedo: ịcha, ịkpụ akwa, ịgbado ọkụ na ịgbakọta, nchacha, eserese, nkwakọ ngwaahịa. Ogwe nchekwa nkedo nwere ọtụtụ ụdị, mana agba dị otu, ọnụ ahịa ya dị elu nke ukwuu, ọ naghị eguzogide okpomoku na oyi, ọ dịkwa mfe ire ere mgbe ekpughere mmiri. A ga -ese ya otu ugboro n'afọ, oriri ya dị oke elu.
Ya mere, ndị ọ na -agụsi agụụ ike inweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi ji nwayọọ nwayọọ tụgharịa uche ha na ngere nchara zinc. Naanị ogige nchedo gburugburu ebe obibi ga -abụ ebe na -egbuke egbuke nke fences ịchọ mma n'ọdịnihu. Usoro nchedo okporo ígwè Zinc: galvanized raw materials, punching, tapping, welding, polishing, sanding, pickling and phosphating, spraying, packing. Ogige nchara Zinc dị mfe ma na -emesapụ aka, nwere ọtụtụ agba, ọnụ ahịa dị ala, yana n'ozuzu ya nwere ndụ ọrụ ihe karịrị afọ iri! Ogige nche nwere ọtụtụ njiri mara dị ka ụdịdị mara mma, ndụ ọrụ dị elu, akụ na ụba na nchekwa gburugburu. Site na onyonyo ọhụrụ ya na imewe ya zuru oke, ọ nwere ike igosipụta ụdị okomoko na ụtọ ụlọ ahụ. Ọ ka mma ịhọrọ ngere ma ọ bụ ngere nchara zinc, nke mara mma ma dịkwa ogologo!
Njirimara nke zinc steel guardrail.
1: Ọ bụghị naanị nkwekọ na akara ngosi na gburugburu ya, kamakwa ọ dị iche na nkeji agbata obi.
2: Ike dị elu, enweghị nchara, ogologo ndụ, ngwa ngwa sara mbara, nhazi ihe owuwu pụrụ iche, ụdị dị iche iche, na ọdịdị mara mma.
3: Ezi mgbanwe, ịgbagọ na mgbanwe nke isi ihe na -eme ka ngwaahịa ngere nwee mmetụta mmetụta ka mma.
4: Ejikọtara na agba dị iche iche, ọ bụghị naanị na ọ nwere njirimara mara mma, kamakwa ọ na -arụ ọrụ nchekwa ka mma.
5: Nlekọta elu nke spraying electrostatic na-eme ka ngwaahịa ndị nchekwa na-arụ ọrụ nhicha dị mma, ịsa mmiri na ịsa mmiri nwere ike ịdị larịị dịka ọhụụ.
6: Agba mara mma, elu dị larịị, ike dị elu, ike siri ike, nguzogide corrosion, antistatic, anaghị ada ada, enweghị mgbawa. Ji achọ nsu.
7: Nchedo gburugburu ebe obibi, ịrụ ọrụ nke ọma, inye ihe na ezi uche dị mma, omenka siri ike, elu ngwaahịa a na-egbu mara mma, enweghị burrs, mgbochi nchara na mgbochi nchara na ọnọdụ, mkpuchi mkpuchi, ezigbo ike, anaghị emetụta anya mmadụ anya, ikuku. na mmiri ozuzo, mgbochi ịka nká, Ọ na-eguzogide ọrịa ụmụ ahụhụ, nwere ọrụ ojiji dị mma, ma zute ịdị nchebe na ike siri ike.
8: Ezi mma, agba mara mma, iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ dị iche iche chọrọ maka ngwaahịa nchekwa.
9: Ọnụahịa ahụ nwere ezi uche yana nke akụ na ụba.
Ogige Ogige, Ihe ịchọ mma nke Iron Gates, Handrail tube, Nkume ịchọ mma, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Akara stampụ,